Idatha evela kuLawulo lweSizwe kuKhuseleko lweZithuthi (NHTSA) ibonisa ukuba iingozi zendlela ezibangelwa ziimethi zemoto zihlala ziqhelekile. Kuyacingelwa ukuba ukhuko oluncinci lwemoto nalo lunokuzisa ingozi eyingozi kwaye akufuneki lungahoywa.
I-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC) ikhuphe ingxelo edwelise ungcoliseko lomoya njengodidi lokuqala lwezinto ezibulala abantu emzimbeni. Kule ngxelo, i-IARC icaphule idatha yokuba ngo-2015, inani labantu abaswelekileyo ngenxa yomhlaza wemiphunga obangelwe kukungcoliseka komoya lifikelele kuma-283,000. Kodwa enyanisweni, ingxaki yongcoliseko lomoya alukho ngaphandle kuphela, kodwa ngaphakathi nongcoliseko lomoya lweemoto lukwanobuzaza kakhulu, makhe sithethe ngomonakalo ebantwini obangelwe yimethi yemoto ene-formaldehyde egqithileyo!
I-formaldehyde yachongwa njenge-carcinogen yodidi lokuqala ngo-2006. Uyisusa njani i-formaldehyde kunye nokwandisa umgangatho womoya sele ingumxholo wezempilo esingenakuwuhoya. Nangona kunjalo, kunokuthiwa ukuba i-formaldehyde, ebangela ukwenzakala emzimbeni womntu ebomini, ikho yonke indawo. Izinto ezichaphazelekayo zibandakanya ifanitshala, imigangatho yeplanga; iimpahla zabantwana, iihempe ezingenantsimbi; ii-noodles zokutya okukhawulezayo, i-rice noodles; i-blistered squid, ukhukhamba zaselwandle, iihagu zenyama yenkomo, ii-shrimps kunye neemoto. Akukho nzima ukubona ukuba impahla, ukutya, indawo yokuhlala kunye nezothutho-zezona zinto zibalulekileyo ebomini bethu, i-formaldehyde ibandakanyekile. I-formaldehyde ekuyo yonke indawo ibenza abantu bakhathazeke.
Ngokomgangatho wesizwe, isixa se-formaldehyde esikhutshwe emotweni akufuneki sibe ngaphezulu kwe-0.08 mg; ukuba ifikelela kwi-0.1-2.0 mg, iipesenti ezingama-50 zabantu abaqhelekileyo bangaliva ivumba; ukuba ifikelela kwi-2.0-5.0 mg, amehlo kunye netrachea iya kucaphuka kakhulu, ibangele umonakalo omkhulu. Ukuthimla, ukukhohlela nezinye iimpawu; ukufikelela kwi-10 mg okanye nangaphezulu, ubunzima bokuphefumla; ukufikelela kuma-50 mg okanye nangaphezulu, kuya kubangela izifo ezinje nge-pneumonia; Ukongeza, i-formaldehyde inokuchaphazela nokuzala, umzekelo, inhalation yexesha elide ye-formaldehyde kubafazi abakhulelweyo inokubangela ukuphazamiseka kosana kunye nokufa; Inhalation yexesha elide ye-formaldehyde emadodeni nayo inokukhokelela kwiziphumo ezibi njengokungachumi kunye nokufa.
Ngo-2010, iNational Indoor Air Quality Op kunye ne-Health Academic Symposium yakhupha idatha emangalisayo: Inani leengozi ezibangelwa kukungcoliseka komoya ngaphakathi kweli lizwe lifikelele kwi-111,000 ngonyaka, kwaye abantu abangama-304 baphulwa yonke imihla.
Ngapha koko, nokuba kukuhonjiswa kweemoto ezintsha okanye iimoto ezindala, kukho intsalela enzulu yezinto eziyingozi, ngakumbi kubandakanya i-benzene, i-xylene kunye nolunye uthotho lwe-benzene, i-formaldehyde, i-acetone kunye nezinye izinto eziyingozi, eziza kubangela ungcoliseko lomoya emotweni. Ukuziva ungenile emzimbeni womntu, iimpawu zexesha elifutshane ezinjengokungonwabi emqaleni, isiyezi, ukudinwa, ulusu komzimba, ukuba semngciphekweni wengqele, ukwehla kokuzikhusela komzimba, kunye neleukopenia, njl.njl. ekhokelela ekuphulukaneni nolonwabo kwisiqingatha sesibini sobomi.
Imethi yomgangatho weemoto kufuneka ihlawule ngakumbi umgangatho ngelixa ijolise ekusebenzeni. Impilo yethu inokuqinisekiswa kuphela ngomgangatho olungileyo. Ngapha koko, iimoto ziyalingana nekhaya lethu lesibini, kwaye iimethi zomgangatho wemoto ziyalingana nemigangatho yasekhaya. Bamele ukuba banobuhlobo kwindalo kwaye bangabi nasongo, Kulula ukuyicoca, akukho bhaktiriya.
Sifuna ukuzisa iimethi zemoto ezingcono kubanini beemoto. Kuphela sisiqwenga senaliti-ebunjiweyo se-TPE mat esinokuzisa amava okuqhuba okusingqongileyo kunye nevumba elingenalo ivumba.
Njengelungu lomhlaba, kuphuhliso lwehlabathi lwexesha elizayo, siye sazisa i-100% enokuphinda isetyenziswe kwakhona izinto ezinokusingqongileyo kwaye sisebenzise izinto ezintsha kwiimveliso zemoto ukukhusela ngokusisiseko imeko-bume yomhlaba, ukuphucula iingxaki zokusingqongileyo, kunye nokunciphisa umthwalo wendalo. Ungcoliseko. Kulindeleke ukuba izise amava okuqhuba asempilweni nakhuselekileyo kubanini bemoto kwaye benze igalelo elomeleleyo kukhuseleko lokusingqongileyo.